QCS For pcb - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
The Design Rules Check (DRC) idanho rinokosha kwazvo pcb unhu achidzora. Kana tinogamuchira murayiro mutsva kubva mutengi, tichava kushandisa zvoga chishandiso kuziva kuti marongerwo hazvina zvakananga placement, hwokutiparadza kana zvimwe addressable marongerwo zvikanganiso.?
Izvi DRC Check zvichaita kumisa netlist uye marongerwo pamusoro pcb magadzirirwo constraints uye mitemo. It achaongorora bhodhi wacho chikamu placement uye kuronda hwokutiparadza akaperera pindana zvinoriumba, untraced nembambo, sizvo rukoko placement uye constraints kuti vari KUPI yakatarwa kuti zvisaririra upamhi hwokutiparadza uye clearances.?We munoita kugadzira mutemo Check nechokwadi kuti pcb Magadzirirwo manufacturable. Kana tisingamutsvakiri chero zvikanganiso isu achawana uchikurukura mutengi.
Kumumvuri Orders : Tinopa Nendege-vachiongorora E-Test kuti diki vhoriyamu uye kumumvuri mirairo. Your wedunhu bhodhi (pcb) iri achiongorora kuburikidza zano kunzi Flying-vachiongorora E-Tester. The Flying vachiongorora testers tinoshandisa tine kurambidzwa shoma pamusoro kuwana, zvinoda hapana muedzo Fixtures, uye anogona kuongorora mapuranga zvinenge risingaperi nhamba utava. The Tester kuongorora kuti pfupi nematunhu, akazaruka matunhu uye nechokwadi mambure ari pcb takaita kwakafanana mambure iri kugadzirwa yenyu. Pashure yokuedzwa zvakakwana, iyo vanotadza mwero mapuranga ako achava asingasviki 1%.?
Production Orders : Tinoshandisa Testing Fixtures yokuedza kugadzirwa mirairo. A mubhedha wezvipikiri tester chinhu zvetsika yemagetsi bvunzo yechigarire iyo ine zvakawanda nembambo rakapinzwa maburi imwe Epoxy phenolic girazi jira laminated jira (G-10) izvo zvichienderana kushandisa tooling nembambo kuti kuonana bvunzo pfungwa on rakadhindwa redunhu bhodhi.
The yechigarire rine inofa duku, chitubu-akatakudza pogo nembambo; mumwe pogo Pin kunoita kuonana nomumwe raiva pedyo nebundu iri hushande pamusoro DUT (mudziyo paaiedzwa). By vachisundira DUT pasi kuzorwa mubhedha wezvipikiri, yakavimbika kuonana kunogona kukurumidza uye panguva imwe chete yakaitwa nemazana kana kunyange zviuru nomumwe muedzo pfungwa mukati hushande yacho DUT.
The Tester kuongorora kuti pfupi nematunhu, akazaruka mumatunhu, uye iva nechokwadi chokuti mimbure pakati pcb takaita kwakafanana mambure iri kugadzirwa yenyu. Pashure yokuedzwa zvakakwana, iyo vanotadza mwero mapuranga ako achava asingasviki 0.1%.
Aoi (zvoga Manyiminya rokuongorora)
Tinoshandisa ane Aoi kuona romukati akaturikidzana ose multi-akaturikidzana pcb. Aoi nemaziso kutarira pechiso pcb. The bhodhi uzere nemashoko akawanda zvinyorwa chiedza uye vakachengeta pedyo scanner kana vanoverengeka yakakwirira tsananguro Camera. Izvi zvinoita kuti kuongorora zvose nzvimbo bhodhi.
Aoi kuti miti pcb bhodhi rokuongorora kuchaita kuona zvinhu izvi:
* Line upamhi kutyorwa
* Spacing kutyorwa
* Dzimwe mhangura
* Missing Mapedhi. ? Ie zvakakurumbira kuti zvinofanira kuva pamusoro bhodhi chinoshayikwa
* Zvikabudura nematunhu
* Cut zvisaririra kana mapedhi
* Hole breakage. (Breakout)? Ie munhu akachera gomba (via) riri kunze kwayo kumhara ikanyanya?
rokuongorora uku zvakawanda hwakavimbika uye repeatable pane Chinyorwa kutarisana kuongorora.
Tiri ISO 9001: 2008 vaipupurirwa. Uye isu muchidimbu tsanangura redu yepamusoro kudzora mamiriro sezvo vakadaro :?
* Unhu wedu chezvawanyora chakarongwa mashoko kubva utariri hwedu, chokuita zvikuru basa redu uye yokutengesa kuronga uye kuita kwedu vatengi zvinodiwa. Unhu redu Gwaro zvinonzwisiswa uye vakatevera zvese uye vashandi vose. vashandi vedu achashandisa kuyerwa zvinangwa kushanda vakananga.
* All date Quality kuzvidzora zvakanyorwa. Records icharatidza sei uye kupi mbishi zvinhu uye zvigadzirwa vakanga kupatsanurwa, ichi kubvumira zvinhu uye matambudziko zvichiita kurondwa kunobva. Our yepamusoro kuzvidzora gadziriro iri kugara audited uye dzinoongororwa nokuda conformance uye kushanda.
* Our yepamusoro kudzora hurongwa anonyora mutengi zvinodiwa uye pave marongedzero mukukurukurirana vatengi vanenge chigadzirwa ruzivo, kubvunzurudza, makondirakiti, varayirwa, dzinovaka uye zvichemo.
* Tinogara kuongorora chokupika redu yepamusoro kudzora mamiriro kuburikidza munyika audits uye misangano. We kuona kana kana kwete unhu maitiro ari kushanda uye chii kugadziridza. Tigokuitira matambudziko zvekare uye matambudziko zvinogona. maitiro edu unochengeta zvinyorwa zvinhu izvi uye zvichizoita sarudzo, uye monitors kubudirira kwavo.
* We rakanyorwa kuti nzira kuti pakubata chaiwo uye zvinogona vasiri conformances (matambudziko chokuita bhizimisi kana vatengi, kana matambudziko zvemukati). maitiro edu anosimbisira kuti chigadzirwa zvose (s) Anonzi "ZVAKAIPA" vari oga uye kuti hapana anogona kushandisa chigadzirwa akaipa kusvikira tingaziva zvokuita akati chigadzirwa zvakaipa, Tinotsvaga kubata honzeri dambudziko ( s) uye kuchengeta zvinyorwa kushandisa sechinhu kuvandudza maitiro edu.
zvigadzirwa zvedu maererano Ul kuchengeteka advertising 94V-0. PCBs edu ose asangane murazvo Rating 94V-0 uye kugutsa Ul zvinodiwa zvose. The murazvo Rating pa Ul 94 rinotsanangura polymeric chikamu 's nemishonga pamoto. Typical ratings nokuti pcb zvinhu zviri 94V-1 kana nani. Rezasi nhamba, dzakanga murazvo (semuenzaniso, 94V-0 ane wakakwirira kureva pane 94V-1) kureva.
Tiri Ul vanopupurirwa uye yedu Logo kambani kunogona kurondwa kudzokera Ul 's mvumo pcb vagadziri pasi. Kuti masimba ari muchikwata ichi, mumwe pcb mugadziri pasi dzakazvimirira Ul inspections vayo kugadzira kwacho uye zvinhu.
The Kungorambidza pamusoro Ngozi Zvinhu Directive kana RoHS rakagamuchirwa muna February 2003 neEuropean Union. The RoHS nomurayiro akatora kushanda musi waJuly 1, 2006, uye kunodiwa kuti kutevedzerwa uye kuva mutemo neimwe nhengo ezvinhu. Murayiro uyu rinokutadzisa kushandiswa ngozi zvinhu zvitanhatu vari zvaAtemisi siyana zvigadzirwa uye magetsi.
From July 1st 2006 zvemagetsi uye yemagetsi midziyo akasuma padenga Europe pamusika hamufaniri ane kutungamirira, mekuri, cadmium, hexavalent chromium, kana murazvo retardants polybromide biphenyl, kana polybromide diphenyl Eteri.
All vakasununguka yedu vatungamirire finishings: Lead vakasununguka Hal, kunyudza sirivha, ENIG uye OSP zvose zvinoenderana RoHS zvinodiwa.